Vaovao - Antony dimy hampiasana milina fanapahana laser mazava tsara
Fanapahana laserdia karazam-pifandraisana tsy mifandraika, miorina amin'ny dingan'ny famokarana hafanana izay manambatra ny hafanana mifantoka sy ny angovo mafana, ary mampihatra tsindry handrendahana sy hanaparitaka fitaovana amin'ny lalana tery na incision. Raha ampitahaina amin'ny fomba fanapahana nentim-paharazana dia manana tombony maro ny fanapahana laser. Ny angovo mifantoka tanteraka omen'ny laser sy ny fanaraha-maso CNC dia afaka manapaka ara-dalàna ny akora avy amin'ny hateviny sy endrika sarotra. Ny fanapahana laser dia mety hahatratra ny famokarana faran'izay marina sy fandeferana kely, hampihena ny fako ara-materialy ary hanodinana ny fahasamihafana eo amin'ny materialy. Ny fizotry ny fanapahana laser mazava ho azy dia azo ampiasaina betsaka amin'ny rindranasa famokarana isan-karazany, ary nanjary fananana sarobidy tao amin'ny indostrian'ny fiara, namokatra faritra sarotra sy matevina miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany, manomboka amin'ny endrika 3D hydroformed ka hatramin'ny airbag. Ny indostrian'ny elektronika mazava dia ampiasaina hamita ny vy na ny plastika, ny trano ary ny hazo fisaka. Manomboka amin'ny atrikasa fanodinana ka hatramin'ny atrikasa kely ka hatramin'ny fotodrafitrasa lehibe dia manome tombony betsaka ny mpanamboatra azy ireo. Ireo no antony dimy ampiasaina amin'ny fanapahana laser.
Fahamarinana tena tsara
Ny fahamendrehana sy ny kalitaon'ny akora nopotehin'ny laser dia tsara kokoa noho ireo notapahin'ny fomba nentim-paharazana. Ny fanapahana laser dia mampiasa andry mifantoka be indrindra, izay miasa ho toy ny faritra misy fiantraikany amin'ny hafanana mandritra ny fizotry ny fanapahana, ary tsy hiteraka fahavoazana amin'ny faritra mafana amin'ny faritra mifanila aminy. Ho fanampin'izany, ny fizotran'ny fanapahana entona avo lenta (mazàna CO2) dia ampiasaina hofafazana fitaovana an-idina mba hanesorana ireo vodin-dambam-baravarankely kokoa amin'ny sangan'asa, madio kokoa ny fanodinana, ary malama kokoa ny sisin'ny endrika sy endrika sarotra. Ny masinina fanapahana laser dia manana fifehezana isa nomerika (CNC), ary ny fizotran'ny fanapahana laser dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny programa milina efa nomanina. Ny milina fanapahana laser izay fehezin'ny CNC dia mampihena ny mety hisian'ny lesoka ataon'ny mpandraharaha ary mamokatra ampahany marim-pototra, marina ary henjana kokoa.
Hatsarao ny fiarovana ny toeram-piasana
Ny tranga misy eo amin'ny mpiasa sy ny fitaovana any am-piasana dia misy fiatraikany ratsy amin'ny famokarana sy ny vidin'ny asa. Ny fikirakirana ny fitaovana sy ny fikirakirana ny fitaovana, ao anatin'izany ny fanapahana, dia toerana matetika iharan'ny lozam-pifamoivoizana. Ny fampiasana laser hanapahana ireo rindranasa ireo dia mampihena ny lozam-pifamoivoizana. Satria dingana tsy mifandray izany, midika izany fa tsy mikasika ny fitaovana ilay masinina. Ho fanampin'izany, ny taranaka andian-jiro dia tsy mitaky fidirana an-tsehatra ataon'ny mpandraharaha mandritra ny fizotran'ny fanapahana laser, mba hitazomana tsara ao anaty masinina voaisy tombo-kase ny andry mahery. Amin'ny ankapobeny, afa-tsy ny fizahana sy ny fikarakarana fikarakarana, ny fanapahana laser dia tsy mila fidirana an-tsehatra amin'ny tanana. Raha ampitahaina amin'ny fomba fanapahana nentim-paharazana, ity fomba ity dia mampihena ny fifandraisana mivantana amin'ny sehatry ny sangan'asa, amin'izay hampihena ny lozam-pifamoivoizana sy ny ratra ataon'ny mpiasa.
Ny fahaizan'ny fitaovana lehibe kokoa
Ankoatry ny fanapahana géometrika saro-takarina miaraka amin'ny marimarina kokoa, ny fanapahana laser dia ahafahan'ny mpanamboatra manapaka tsy misy fanovana mekanika, amin'ny alàlan'ny fitaovana bebe kokoa sy ny hateviny. Ny fampiasana ny andry mitovy amin'ny ambaratonga avo lenta, ny tanjaka ary ny faharetany, ny fanapahana laser dia afaka manapaka metaly isan-karazany, ary ny fanitsiana mitovy amin'izany amin'ilay milina dia afaka manapaka tsara ireo fitaovana misy hateviny isan-karazany. Ny singa cnc integrated dia azo alefa ho azy mba hanomezana asa bebe kokoa.
Fotoana fanaterana haingana
Ny fotoana ilaina amin'ny fananganana sy fampandehanana fitaovana fanamboarana dia hampitombo ny vidin'ny famokarana isaky ny sanganasa tsirairay, ary ny fampiasana ny fomba fanapahana laser dia afaka mampihena ny fotoana fitaterana manontolo sy ny vidin'ny famokarana. Ho an'ny fanapahana laser dia tsy ilaina ny manova sy mametraka lasitra eo anelanelan'ny fitaovana na ny hatevin'ny fitaovana. Raha ampitahaina amin'ny fomba fanapahana nentim-paharazana dia hihena be ny fotoana fananganana laser, mitaky fandaharana milina bebe kokoa noho ny fampidirana fitaovana. Ankoatr'izay, ny fanapahana mitovy amin'ny laser dia mety ho 30 heny haingana kokoa noho ny tsofa fahita nentindrazana.
Vidina ara-materialy ambany
Amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba fanapahana laser, afaka mampihena ny fako ara-nofo ireo mpanamboatra. Ny fifantohana amin'ny vatan-kazo ampiasaina amin'ny fizotran'ny fanapahana laser dia hamokatra kely kokoa noho izany, hampihena ny haben'ny faritra voan'ny hafanana ary hampihena ny fahasimban'ny hafanana sy ny habetsaky ny fitaovana tsy azo ampiasaina. Rehefa ampiasaina fitaovana maivana dia mampitombo ny isan'ny fitaovana tsy azo ampiasaina koa ny fiovana ateraky ny fitaovana milina mekanika. Ny toetra tsy mifandray amin'ny fanapahana laser dia manafoana an'io olana io. Ny fizotry ny fanapahana laser dia afaka manapaka amin'ny alàlan'ny famaritana avo lenta kokoa, ny fandeferana henjana kokoa ary ny fihenan'ny zavatra simba ao amin'ny faritra misy ny hafanana. Mamela ny famolavolana ampahany hametraka akaiky kokoa amin'ny fitaovana, ary ny famolavolana henjana kokoa dia mampihena ny fako ara-nofo ary mampihena ny vidin'ny materialy rehefa mandeha ny fotoana.